Artificial Intelligence : Eessa irraa jalqabee baruun danda’a – Barataa
Roobootiin gara garaa akkamitti akka tolfaman yaaddee beektaa? Akka duraa miti, wantoonni hedduun dura fiilmii irratti arginu hedduu tahaa jiru. Artificial Intelligence kan jennu, qorannaa sirna koompiitaraa, moosaaji yookiin koompiitara akka namaatti hojjatu ykn yaadu uumuuf taasifamuudha. Hiikni isaaf kennamu bal’aadha, gabaabsee akkasitti hiike.
Galmaa fi kaayyoo AI
Kaayyoon AI iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa kaayyoo yeroo gabaabaa keessatti tahuudha. Kaayyoo jalqabaa kanaan koompiitaroota baran, barsiisan, karoorsuu danda’an, dubbachuu danda’an(Natural Learning Processing NLP) uumuu yoo tahu, kaayyoon inni lammataa immoo kaayyoo yeroo dheeraati. Kaayyoon kun koompiitaroota sammuu dhala namaan wal madaalan ykn caalan uumuu jechuudha. Kana jechuun koompiitarri ykn robot tolfamu jireenya hawaasummaa namni tokko geggeesu ,geeggeefachuu danda’a jechuudha.
AI gosoota gara garaa heddu jiraatanis iddoo sadi gurguddotti qoodamu. Isaanis kanneen armaan gadiiti.
1. AI laafaa (week AI) : Gosti AI kun wanti laafaa jedhameef, ajaja tokko qofa raawwata waan taheef. Fknf, bot, siri, cortana fudhachuu dandeenya.
2. AI cimaa (Strong AI) : Inni kun AI isa dhugaati. Koompiitara akka sammuu dhala namaatti cimaa taheedha. Ta’eewwaan namni raawwachuu danda’u kamuu raawwachuu ni danda’a. Fkf, Sofiyaa fudhachuu dandeenya.
3. Artificial Superintelligence : Inni kun koompiitara dhala namaan wal qixa tahe jechuu dandeenya. Yaaduu, waa uumuu, hawaasummaa fi kkf qabaachuu danda’u. Yeroo heddu sadarkaa kanaan roobootii hojjachuun ni sodaatama.
Eessa irraa jalqaba AI baruu?
AI baruu barbaadda taanaan, barnoota koompiitara isa programming language jedhamu baruu qabda. Programming language heddu jira. Isaan keessa barnoota maashinaaf yeroo heddu salphaa fi jaalatamaan Python baruu qabda. Iddoowwan muraasa python irraa baruu dandeessu
Kunneen isaan muraasa qofa. Bal’innaan Google gochuudhaan barnoota kana iddoo gara garaa irraa baruu dandeessu.
Achi booda hoo?
Python erga bartee booda, sagantaa koompiitaraa bot jedhaman python gargaaramuudhaan hojjadhu. Bot n gosoota AI isa laafoo jedhaman jalatti ramadama. Ajaja itti kenname qofa hojjata. Yeroo heddu dhaabbileen gurgurtaa garagaraa marsariitii isaanii irratti bot gargaaramu.
Hangana erga deemtee booda barnoota machine gara garaa kanneen akka pyBrain,
Scikit-learn, scipy, robotics fi algoorizimoota gara garaa heddu baruu qabda .
Walumaagalatti, maxxansa kana keessatti, eessa irraa jalqabdee barnoota AI jalqabuu akka dandeessu hubattee jira jedheen yaada.
Technology June 22, 2019
Creativity, Updates November 23, 2018